Argentina Oo Qarka U Saaran Iney Ka Harto Koobka Aduunka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Argentina Oo Qarka U Saaran Iney Ka Harto Koobka Aduunka
Argentina ayaa qarka u saaran iney ka harto koobka Aduunka ee xagaaga soo aadan ka dhici doona Russia kadib markii ay barbaro gool la’aan ah la gashay qaranka Peru, kulan ka tirsan isreeb-reebka koobka aduunka wadamada koonfurta America.
Argentina ayaa heshay dhawr fursadood oo ay gool ku dhalin kareen iyadoo Lionel Messi ay birta ka beenisay fursad dahabi aheyd oo u muuqatay mid hogaanka u dhiibi kartay Argentina intii lagu jiray qeybtii hore ciyaarta.
Natiijadaan waxey ka dhigtay in Argentina ay kaalinta 6-aad u dagto marka la eego [taxa kala sareynta wadamada koonfurta america] waana darajo ka banaanka ah wadamada loogu tala galay iney qaaradaas u matalaan tartanka.
Kaalinta shanaad haatan waxaa ku jira Peru oo la ciyaari doonta hadii ay sidaan wax ku dhamadan xulka New Zealand kulan kala bax ah, balse Argentina waxey ka faa’ideysan karaan isku dhaca Peru iyo Colombia ee kulanka ugu dambeeya kuwaas oo aan ka fogeyn dhibco ahaan.
Messi wuxuu doonayaa inuu ciyaaro koobka aduunka kaas oo noqon kara kiisii ugu dambeeyay, isagoo ku riyoonaya inuu soo afjaro dhibaatada ka heysata inuu qarankiisa koob kula guuleysto, balse Jorge Sampaoli ayaa wali qaba rajo ay kusoo bixi karaan.
“Xaaladeena maahan mid lagu raaxeysan karo” ayuu yiri Sampaoli, “Balse anaga ayey nagu xiran tahay”
“Wali waxaa jirta kalsooni aan kusoo aadno koobka Aduunka”
Argentina waa xulkii yimid finalka tartanka koobak Aduunka sadex sano ka hor markii la isugu yimid Brazil, kulankooda ugu dambeeya waxey la ciyaari doonaan Ecuador, waxeyna usoo bixi karaan koobka hadii ay guul gaaraan.
Dhibka jira wuxuu yahay in Argentina ay kaliya 1-jeer guul kasoo gaartay iyadoo marti u ah Ecuador tan iyo 1966, waxeyna noqon doonaan xulkii ugu horeeyay ee tiigsada final isla markaana kan xiga usoo bixi waayay waxaana sidaas sameeyay Czechoslovakia in 1962 iyo 1966.